DHALADA DABOOLKA: WAXYAABAHA KIIMIKADA AH, QAABABKA FAA'IIDO LEH, WAXYEELADA IYO ISKA HORIMAADYADA, MA CUNI KARTAA CALEEMOOYINKAN IYO SIDEE KALE AYAAD U ISTICMAALI KARTAA? - MAQAALLO
Isticmaal, waxyeelo iyo isticmaalka daboolka daboolka
Way adagtahay in la helo ninkii beerta ka shaqaynayay oo aan waligiis ku korin doonin roodhiyadiisa beerta. Khudraddani waxay ku dhacdaa wakhti gaaban waxayna ku jirtaa xaddi badan oo fiitamiin ah.
Isla mar ahaantaana, dushooda daboolka ayaa faa'iido u leh jidhka bini-aadanka marka loo eego khudaarta cagaaran. Maqaalka waxaad ka akhrisan kartaa qiyaasta kiimikada, sifooyinka faa'iido leh iyo khilaafaadka si loo isticmaalo daboolka daboolka.
Waxaan wadaageynaa cuntooyinka ugu fiican ee lagu cuno cunnada suxuunta kala duwan ee cagaarka khudraddan. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Qeexida iyo walxaha kiimikada ee cagaarka dabocase
Radish waa warshad qallalan sanadle ahsameynta warqad rosette iyo khudaar cagaaran. Warshad ka mid ah khudraddan waxay ka kooban tahay caleemo cagaaran oo cagaar ah, dhammaantood, ama qaabaysan. Caleenta caleenta ah ee dabocase. Maadada waxay noqon kartaa:
Mararka qaarkood waxaa jira daboolka wax lagu dhejiyo.
Dabocase waxaa lagu qiimeeyaa faa'iidada.. Khudraddaas waxay u muuqataa midka ugu horeysa waxaana badanaa loo isticmaalaa salad. Laakiin dad badan xitaa ma ogaan karaan in dusha sare ee dhirta ay ka kooban tahay nafaqooyin ka badan khudaarta cagaaran.
Qeybta cagaaran ee dhirta, micro-iyo macronutrients waxaa laga helaa qaab isku dhafan, iyo farsamooyinka chives ee nidaamka dheef-shiid kiimikaadku wuxuu u dhacaa si dhakhso badan.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay dhalada dabocase waxaa ku jira nafaqooyin badan, fiitamiin iyo walxo raad raac:
fitamiinada A, C, K, PP;
inta kudhowaad dhammaan kooxaha fitamiin B;
ascorbic, salicylic iyo nicotinic acid;
saliidda aanta lahayn.
Caleemaha cagaaran ee cagaaran ayaa loo yaqaannaa antibiyootig dabiici ah oo dhab ah. Maaddooyinka ku jira waxay ku dili karaan jeermiska iyo fayraska jirka iyo xoojinta nidaamka difaaca jirka. Intaa waxaa dheer, dhaladooda da'da ah ee warshad this si guul leh loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo cudurrada kale:
Avitaminosis. Maqnaanshaha jirka ka dib xilliga jiilaalka waxaa lagu soo celin karaa iyadoo la kaashanayo caleemaha yar yar ee dabocase.
Rickets Qaybta daaweynta hodanka ah ee cagaarka ayaa ka caawisa sidii ay ula tacaali lahaayeen cudurkan carruurta oo looga hortago horumarinta qalfoofka iyo xubnaha gudaha.
Ku xadgudubka mareenka caloosha iyo caloosha, caloosha.
Sonkorowga. Walxaha ku jira geedka, waxay yareeyaan heerka sonkorta.
Cudurada habka kaadida.
Cayilka. Warshad si fudud ayaa loo dheefshiiday oo waxay ka hortagtaa yaraanta walxaha lagama maarmaanka ah ee ka imaanaya kuwa cuntada ku jira.
Waa muhiim: Dabocase cagaaran wuxuu ka hortagaa horumarinta kansarka, wuxuu leeyahay saameyn lid ku ah bakteeriyaasha wuxuuna kor u qaadaa nudaha unugyada.
Badeecadani maahan wax khilaaf ah.. Dadka qaba cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka, laguma talinayo in lagu daro dusha sare ee roodhiga in ka badan hal mar asbuucii. Kuwa lagu soo ogaaday boog-guntan ama duodenal, gumaacis, ama ka sii daridda cudurrada gallstone, waa in ay si buuxda u tirtiraan dushooda cuntada.
Sideen u isticmaali karaa cagaarka dabocase?
Radishes cagaaran cusub ayaa si guul leh loo isticmaalaa daawada dadweynaha., samaynta noocyo kala duwan:
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa daboolka daboolka cuntada.:
waxaa loo jaraa saladh;
loo isticmaalo sida xilliga koorsooyinka koorasyada koowaad iyo labaad;
Dareem sida kaabajka.
Hooyooyinka qaarkood waxay keenaan cagaarka xilliga jiilaalka:
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato fiidiyo ku saabsan faa'iidooyinka daboolka daboolka iyo isticmaalka:
Nooca ugu caansan ee codsiga dabocase ee daawada dhaqameedku waa faleebo. Waxay leedahay saameyn lid ku ah bakteeriyada, bakteeriyada iyo waxtarka tonic waxayna caawisaa cuduro badan, haddii loo isticmaalo qaabka daaweynta:
Gaastiriko leh oo leh aalado hooseeya.
dusha daboolka - 1 tbsp. l.
biyaha - 250 ml.
Caleemaha Young ee dabocase si fiican loo dhaqo, la qalajiyey leh suunka, ka dibna la jeexay mindi ama dillaac gacanta.
Qadarka loo baahan yahay ee qashinka ceeriin ah ayaa lagu shubay biyo karkaraya oo ka tagay si loo yareeyo saacad.
Qaado faleembo saddex jeer maalintii ka dib cuntada, 1/3 koob. Koorsada daaweyntu kama badna 3-4 maalmood.
Faleebo caleemaha la qalajiyey
Waxaad samayn kartaa faleebo caafimaad leh oo dusha sare leh. Cagaarka cagaaran ma sii dheeraanayo, iyo inuu awoodo in uu u isticmaalo ma aha oo kaliya guga hore, waa la qalajiyey oo la kaydiyey.
Caleemaha waa la maydhaa, ka saar qoyaanka adoo isticmaalaya suun warqadda ah, la jajabiyey.
Ka dibna cagaarka waxaa lagu dhigaa maro suuf ah ama warqad ku jirta lakab khafiif ah.
Qalitaanka waa in lagu sameeyaa meel hawo leh si aanay u helin iftiinka qorraxda.
Si aad u diyaariso soo galiyey for 1 tbsp beedka cuntooyinka ceeriin ah waxaa la qaadaa 300 ml biyo karkaraya, ku shubay kuna tagay si ay u dilaan.
Cabitaanka bogsoon wuxuu diyaar u yahay 45 daqiiqo.
Qaado saddex jeer maalintii 15 daqiiqo cuntada ka dib. Waxay badanaa caawisaa marka:
Dhalooyinka dabajooga waxay leeyihiin qaabab qurux badan.. Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay maaskaro waji ah noocyada kala duwan ee maqaarka.
Maaskaro nafaqo leh
Doorashadan waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada maqaarka, ka dhig mid aad u jilicsan.
cagaarka - 1 tbsp. l.
koraa saliid - 6 dhibcood;
istaarijka - 1 tsp.
Dhalxumada si fiican ayaa loo dhaqaa, la qalajiyaa oo si yarna loo googooyaa.
Ku dar saliida khudradda ah (doorbidayaa saytuunka) iyo istaarijka.
Dhammaan maadooyinka ayaa si fiican loo isku qasan yahay waxaana lagu daboolaa wejiga.
Hayso waa inuu ahaado 10 daqiiqo, ka dibna wejiga waji biyo diirran oo ku faafi kareem.
Nidaamkani wuxuu ka caawiyaa inuu maqaarku ku dhaco, ka takhaluso cilad aan caafimaad ahayn, xitaa qaab dhismeedka. Waxaa lagula talinayaa dhamaan dumarka 30 sano ka dib.
cagaarka dabocase - 1 tbsp. l.
dhoobada cad - 1 tsp.
Si cagaarka la jajabiyey ku dar kefir iyo dhoobo, si fiican u walaaq si aan lahayn buro.
Ka dib markii la dhaqo, waxaa lagu daboolaa maqaarka wejiga, ka dib khadadka miisaanka.
Qalliinka wuxuu soconayaa 10 daqiiqo. Maaskarkan waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo asbuucii mar.
Cabitaanka casiir cusub
Casiirka ee cagaarka dabocase waxaa loo isticmaalaa daawada dadweynaha ee daaweynta cuduro kala duwan. Waa in la xusuusnaado in cabitaankan aan la qaadin, sababtoo ah wuxuu keenaa cuncun xajiinka xuubka iyo xanuunka caloosha. Casiirka cabitaanka khamriga mid la mid ah oo la cabbo biyo la karkariyey.
Laga soo bilaabo boronkiitada iyo SARS
Mugdi ku salaysan casiir khudradda ayaa ku fiican qufuc dheer.
dabocase dhalada - 100 ml;
juice ee dabocase iyo liin - 100 ml;
Casiir basasha - 100 ml;
sonkorta 10 g;
malab 1 tsp.
Dhammaan maadooyinka ayaa si fiican loo isku qasan yahay.
Ku shub saxan muraayad mugdi ah.
Oo lagu keydiyay qaboojiyaha.
Qaado saddex goor maalintii maalintii 1 tsp. 30 daqiiqo cuntada ka hor.
Laga soo bilaabo dhuun xanuunka
Casiirka dabacasaha cusub wuxuu kaa caawinayaa daaweynta xuubabka daran.
Wareega, casiirku waa isku dhafan yahay marka loo eego biyaha kulul.
Codso 5-6 goor maalintii maalintii cuntada kadib.
Koorsada daaweynta waa 5 maalmood.
Muuqaal cadeyn ah
Maaskarada ku salaysan casiirka cagaarka dabocase waxay ka caawisaa in laga takhaluso da'da da'da, ka dhig maqaarka cad iyo jilicsan. Waxyaabaha loogu talagalay diyaarinta xilliga guga waxaad had iyo jeer heleysaa gacanta.
cabitaanka cagaarka dabocase - 1 tbsp. l.
Casiir khudradda - 1 tbsp. l.
casiir qajaar - 1 tbsp. l.
labeen dhanaan - 1 tbsp. l
Dhammaan maaddooyinka lagama maarmaanka ah waa isku qasan.
Codso inaad ku nadiifiso maqaarka leh isbuunyo. Nidaamku wuxuu soconayaa 15 daqiiqo.
Ka dibna maaskarada waxaa la dhaqaa biyo diirran oo isticmaal kareemka caadiga ah.
Haddii maqaarka wejiga uu yahay mid adag oo qalalan, waa in la tirtiraa subaxda iyo fiidkii la cabitaan cusub ee cagaarka dabocase.
Oo dushoodana waxaa ku jira buro;
tuujin juuska ka baxa iyaga oo la qasiqiyay biyo 1: 1;
xoqin maqaarka subaxda iyo fiidkii, ka dibna maydh oo isticmaal kareem joogto ah.
Kadib habka ugu horeeya, waxaad ogaan kartaa faraqa: maqaarku wuxuu noqdaa mid jilicsan oo qallafsan.
Miyaa suurtogal ah in la cuno?
Markaad cunto karisid cuntooyinka kala duwan, waxay isticmaalaan khudaarta cagaaran, laakiin sidoo kale cagaarka cagaarka.. Waxyaalladan bogsashada ah waxaa lagu daraa salad, koorasyo ​​koowaad iyo labaad, waxaa laga sameeyey suugo, goostay jiilaalka.
Salad leh qajaarka iyo yaanyada
Guddi: Saladhkan fitamiinku wuxuu siin doonaa jirka oo leh qayb maalinle ah oo ascorbic acid ah oo wuxuu noqon doonaa mid ku habboon qadada ama cashada.
cagaarka dabocase - 2 rucubood;
qajaarka - 2 nooc;
yaanyada 2 gogo ';
koraa saliid - 50 ml;
Qajaarka jarjar goglan, yaanyada - maraqa yar yar.
Greens waxaa lagu jajabiyay mindi ama gacmaha gacmaha.
Maaddooyinka oo dhan waa isku dhafan, cusbo dhir leh, saliid.
Haddii la rabo, waxaad buuxin kartaa salad leh labeen dhanaan, laakiin kiiskan wuxuu noqon doonaa kaloori-sarre sare.
Qaar ka mid ah muusikada ayaa ka soo baxa duufaanka qalalan ee jiilaalkaiyada oo lagu darey dhirta dhadhanka iyo dhadhanka. Greens waa la jajabiyey, la qalajiyey oo isku dhajiyey xawaashka aad jeceshahay. Waxaa lagu daraa marka cuno maraqa, borscht iyo suxuunta ugu muhiimsan.
Markaad beerto roodhiga ku sawiran, waa inaad xusuusataa in khudaarta cagaaran aysan ahayn mid faa'iido leh, laakiin sidoo kale dusha sare ee warshadan. Iyadoo isticmaal macquul ah, kaliya kuma koobi karaan jidhka oo leh maaddooyin waxtar leh, laakiin sidoo kale waxay ka caawiyaan daaweynta cudurrada badan iyo hagaajinta quruxda wajiga.